HomSuvedi — Mon, 08/27/2018 - 20:42
सारै धामा गर्दा पनि ग बिताउन पाइन
क विताउँदा एक तुर्को माया पिर्ति लइन
क विताउन अब छाडी ग बिताउन थाल्छु
बरु एउटा गिजाेल्नलाई घाँस हाली पाल्छु ।।
ग बिताउने गँड्यौला उम्रिए
अाफू भने हेरेकाे हेरेकै ।
क बिताउने कुरा यसै हराएछ आज
हामीलाई क बिताउँदा सारै लाग्छ लाज
गिजोलगाजोल लेख्न अब हामी घुँडा टेकौंं
त्यसैभित्र संसारको महाभाष्य लेखौं ।।
गजल लेख्यो तल्लारे साइँलाले
आफू भने हेरेको हेरेकै ।।
कुनै लाग्छन् सफा सुघ्घर कुनै लाग्छन् जुम्रे
ग बिताउने आज भोलि गावैं भरि उम्रे
लेख्नै मात्र कहाँ हो र गाउँछन् अझ यस्तो
पक्का भैंमा बूढो भैंसी छेर्दैछ कि जस्तो ।
गाजलेले यो देश खाएछन्
भाषणमा पहाड फोरिन्छ
HomSuvedi — Sun, 08/12/2018 - 13:37
“जात गोत्रथर पनि कसैले परिवर्तन गर्दैमा परिवर्तन हुन्छ ? मान्छे जुन परिवारमा जन्मियो उसको त्यही थर हो, जात हो र त्यही गोत्र हो । हामी महिला उहिल्यैदेखि सट्टापट्टाको वस्तुजस्तो हुँदै आएका छौंं । लोग्नेको चैं जात, थर गोत्र उही रहने अरे हामीले चैं बिहे गरेपछि फेरिनु पर्ने अरे । हामीलाई यो कुरामा अपमान र अन्याय गर्न पाइन्न....”
HomSuvedi — Sat, 08/11/2018 - 11:30
च्यातिएको मायालाई टालिराख्या छु
तिमी आउने आसमा टुकी बालिराख्या छु ।।
मेरो देव मेरो प्रिय सबै तिमी हौ
आशीर्वाद माग्न धूप हालिराख्या छु ।।
खपिसक्नु छैन जाडो चिसो बढेर
तिमी आउँछौ भन्दै ओछिन खाली राख्या छु ।।
नसम्झनु मैले माया मारे भनेर
तिम्रो आशा मनमा सधंै पालिराख्या छु ।।
ढोका खुला राख्न पनि डरमर्दाे छ
तर मैले पारदर्शी जाली राख्या छु ।।
आँसु झार्न नपाएर सारै सकस भो
भित्रै थुन्ने परेलीका आली राख्या छु ।।
तिमीलाई पूजा गर्ने फूलबारीमा
राम्रा राम्रा फूल गोड्ने माली राख्या छु ।।
ईश्वर भनौं दैव भनौं सबै तिमी हौ
पूजा गर्न सजाएर थाली राख्या छु ।।
HomSuvedi — Fri, 08/10/2018 - 14:29
मेरा कवितामा इलाम
स्वदेशमा अनन्त छन् यहाँ महौषधीहरु
फलेर पाक्तछन् यहाँ रसालु सुन्तलाहरु
चियाबगान भित्र छन् प्रिया शकुन्तलाहरु
अगम्य ध्यान योगमा पलेंटी नै कसे सरी
उचाइ नाप्तछन् यहाँ बसेर श्रृङ्खलाहरु ।।३।।
वसन्त राग गाउँदै यतै घुसेर व्यस्त छन्
कुहू गरेर कोइली निबीड भित्र मस्त छन्
म वागमा फूल नयाँ फुलाउँछु
HomSuvedi — Thu, 08/09/2018 - 20:41
सङ्गीतमा राग नयाँ खुलाउँछु
मस्तिष्कमा काव्य कला तरङ्ग छ
तथापि मेरो मन यो भरङ्ग छ ।।
म भित्र यस्तो अटमट्ट स्नेह छ
त्यो स्नेह थाम्ने अझसम्म देह छ
नाचौं कि नाचौं सरीको उमङ्ग छ
HomSuvedi — Thu, 08/09/2018 - 09:14
मैले जीवनका अनन्त सपना रोपें यसै ठाउँमा
मेरा सैंतिस वर्षका पलहरु पोखें यसै ठाउँमा
केही भन्नु रहेन शून्य मनको यो रिक्त मन्तव्यमा
रित्तै हात लिएर आज म हिंडें अज्ञात गन्तव्यमा ।।
HomSuvedi — Tue, 08/07/2018 - 09:11
समग्र संसार छ वारपार
छ जन्म हाम्रो अझ बारबार
नसानसामा स्तनपान गर्ने
रहन्छ हाम्रो अधिकार सार ।।
कसै कसैका मति भ्रष्ट हुन्छन्
र बालको त्यो अधिकार छिन्छन्
रहन्छ मातृत्व सधैं अभाव
चाँडै हराओस् अब त्यो प्रभाव ।।
म खान पाऊँ अनि चुस्न पाऊँ
चुसेर वक्षस्थलमै निधाऊँ
निधाउँदै फेरि म ब्यूँझिएर
म दुग्धधारा अभिषेक पाऊँ ।।
HomSuvedi — Mon, 08/06/2018 - 01:23
यो देशमा घातक चम्किएपछि
केही महापातक लम्किएपछि
यो मित्रतालाई छुटाउने भए
सम्बन्धको सूत्र टुटाउने भए ।।
HomSuvedi — Thu, 08/02/2018 - 18:30
बोधो यो किन हो दिमाग अहिले फुर्दै नफुर्ने भयो
केही सिर्जन गर्न साइत कतै जुर्दे नजुर्ने भयो
सारा पूर्व प्रयत्न मेटिन पुगे मस्तिष्क रित्तो किन
साठीबाट उँभो चढेपछि भयो मेरै उछित्तो किन ?
HomSuvedi — Mon, 07/30/2018 - 13:23
बाधा नपार मेरा मेची र कालीलाई
भो भो सहन्न तिम्रो हाली मुहालीलाई ।।
यो देशको सीमानामाथि नगाढ आँखा
लाखौ अडाडि सर्लान् को छोड्छ जालीलाई ।।
थाप्लो उठाई उच्चा पारेर बाँच्न सक्छौं
सियो नठान साथी तातो छ फालीलाई ।।
चोखो र तथ्य के हो हेक्का रहन्छ हाम्रो
छुट्याउने छ बानी छोक्रा र छालीलाई ।।
हामी सपार्न सक्छौं हाम्रै छ बाटिका यो
काँढा र फूल के हो थाहा छ मालीलाई ।।
HomSuvedi — Sat, 07/28/2018 - 20:30
सम्भावना छन् र सुभावना छन्
सद्प्रेरणा छन् शुभकामना छन्
यस्ता हजारौं शुभभाव माझ
उत्ताउलो भो किन यो समाज ?
editor — Wed, 07/25/2018 - 02:30
नेपाली साहित्यमा भारतीय नेपाली साहित्यकारहरूको निकै लामो र ऐतिहासिक महत्वको योगदान रही आएको छ । अहिलेका भारतीय नेपाली साहित्यमा कालिम्पोङमा रहेर निकै क्रियाशील रूपमा कविता कर्ममा लागेर कलम चलाइरहेका कविहरूमा मनोज बोगटी उम्दा कविहरूमा पर्दछन् । सन् १९७९मा दार्जिलिङमा जन्मेका कवि बोगटीका आधा दर्जन कविता संग्रह प्रकाशित छन् । कविताकै लागि भारतीय अकादमी पुरस्कार समेत विजेता कवि बोगटीसँग साहित्यकार पेशल आचार्यले गर्नुभएको साहित्यिक महत् एवम् रागात्मक भलाकुसारीको सार ।
म जग्गा ब्यापारी
कस्तो रहेछ जिन्दगी
हामी अर्कै बाटो रोजौं
मेरो देश रोईरहेछ
म छक्क पर्छु